Kudzidza Poni sePet & Riding | Zvipfuwo Mapeji evaravara ehurukuro
Kudzidza Poni sePet & Riding | Pets
Pony inoda vana, asi haisi shoma uye iri nyore kutarisira
Rubatsiro, mwana wangu anoda kudzidza kudzidza
Kunyange zvazvo pony mafungiro muGermany ave achizivikanwa kwemakore akawanda, chimwe chinhu chakafanana nepony paseti yakavhuvhuta pamusoro pedu. Inowanzova chinhu chakanaka kupa mwana wako zuva rekuberekwa kana chimwe chiitiko pony, zvichida kunyange Kutschwägelchen.
Mwana anodikanwa uye asina maturo, asi: maponi anodiwa nzvimbo yakawanda yekugara
Hapana chakakanganisika neizvozvo, nokuti kubata nevanokudzwa mabhiza kunogona kungobatsira mwana. Asi zvinosuruvarisa kuti zvakatadza kutadza mumafungiro emabhiza maduku aya, anowanzotarisana nemhirizhonga yemhuka. Imwe inotarisa zvinyorwa zvepasoni uye inofunga kuti inogona kuwana pamwe nekudya zvishoma nekutarisira. Izvo chaizvoizvo hazvina maturo; asi mhuka dzose dzinoda ruzivo rwehupenyu kuitira kuti urarame hupenyu hune utano maererano nemhando dzayo. Uyewo mapaoni edu maduku.
A pony sechipfuwo chevana
Kubva kubva pakutanga, kana mugari weguta asina nzvimbo yakakwana kana ane hama munyika, haagoni kubata nemafungiro emaponi. Pony, sezvandakataura, inoda nzvimbo - uye kwete kunyange zvishoma. Rinoda kurarama pane mafuro kubva mutsime kusvikira pakuvhuvhuta. Munyika yavo yekuNordic inogara kunze kunyange mumwedzi yechando. Saka haisi bhiza rakagadzikana!
Ichokwadi kuti isu tichiri kuda tsvina inoda kuve yakakura zvakakwana kuti igare munguva yechando kana kuchengetedza zvokudya (pamusoro pe30-35 mazanaweight yehusi). Uye izvozvo zvinoda nzvimbo yakawanda! Zvinotorawo mazana mashoma emadhora e oatmeal; nokuti pony haigoni kurarama pane furu chete.
Uyezve, kuchine nzvimbo yehuta yekuparadzira inoda, nekuti kunyange pony inoda kushambidzika uye inonyorera. Hatidi kunyange kutaura pamusoro pekushanda maawa, nokuti iwe unofanira kungovatora kuti uchenese goro zuva rega roga uye usvike uswa hwakachena. Mukuwedzera, kuzviratidza kwebhiza pachako nebhurosi uye harrow, nokuti zvisina kudaro iwe munguva pfupi uchange uine shabby, unsightly mhuka.
Nekutenga pony yakanaka saka mamwe mamiriro akabatanidzwa. Usafunga kuti munda mukuru wakakwana. Pakupedzisira, izvi zvakakwana kune mashuzha mashomanana, asi kwete ponyoni.
Nyaya iyi inowanikwa kune vagari vomuguta kupfuura kune vagari vomumaruwa, avo vanowanzopa mamiriro akanaka. Uye avo vanogara pedyo nenyika vanogonawo kuwana nzira yekugara nayo bhiza rake rekuti vashandise papurazi nemafuro.
Inofanirawo kuyeukwa kuti pony haina kushandiswa. Pasinei nokuti iwe unotenga Icelander, muShetlander kana muchiNorway, unofanira kuverenga pane mhuka ine 750 Euro - zvichienderana nerudzi, kutasva uye kutyaira. Mukuwedzera, kune matambo, zvigadzirwa, mabhanhire, shingaira, motokari uye kukanganisa kwevhavha ine mupfuri.
Mwana uye pony
Zvisinei, kana iwe wanyatsonzwisisa matambudziko aya ose iwe haufaniri kunonoka kutenga. Usaedza kuedza kutenga bhiza rakaderera. Pane kazhinji chimwe chinhu chiri shure kwayo. Chero mhuka yacho yakaipa kana isiri mwana, inononoka, zvichida kurwara.
Inofanirawo kurangarirwa nekuda kwechinangwa chaunoda kutenga pony. Pamotokari yevana, madzimai maduku zvikuru akakwana. Kana iwe uchida kutasva, unofanira kutenga Icelandic kana Shona. Izvi zvine urefu hwemita uye chimwe chinhu chiri pamusoro pacho.
Nezvisikwa, ma poni anofarira vana. Mumwe haagoni kunyanya kufunga nezvemufananidzo wakanaka pane vana pamwe ne pony. Pasinei nokuti iri kutasva muzhizha, kutora motokari mbiri-mawere kana kutambanudzwa pamberi petiravha muchando - inogara iri shamwari yechokwadi yevanhu. Kana uine bindu rakakura, iwe unogona kushandisa iri bhiza duku kudyara. Maererano nehukuru hwayo uye yekudya kwayo, inotonyanya kukoshesa kushanda kumabhiza makuru.
Iye zvino unogona kunge uchifarira pane kutenga pony. Pano iwe uchawana magazini akasiyana-siyana emhuka anopa poni muchikamu chavo chekutsvaga. Uyewo mumapepanhau ezuva nezuva mabhiza mashoma anowanzogoverwa kutengeswa.
Kunyanya kuvasikana, chido chekudzidza kukwira chikamu chepamusoro chavanoda. Chido icho hachifaniri kuwira munzeve dzisina maturo nevabereki, nokuti hazvina mimwe mitambo inobatanidza kushanduka, kudzidza kwemaonero ezvomutoro uye rudo rwezvisikwa zvakadai sokuenzanisa.
Kana vana vachida kudzidza kudzidza
Runako rwekuenzanisa, zvakare, mhuri inobuda pamwe chete pavhiki uye inogona kunakidzwa nekusika.
Vaduku vashoma pony
Muduku wacho anouya nekutasva pony. Maiponi echiShetland anonyatsokodzera pano, sezvo hutanda hwavo hushoma hunoenderana nekuwanda kwevana. Saka hakuna kutya kutasva uye zvinonakidza zvinobva pakutanga pakutanga.
Iko pony ndeyechokwadi ichiri kutungamirirwa nevabereki kana kuti murayiridzi akatasva. Zvechokwadi, vana vaduku havana mutoro wemhuka, vanongoda kudzidza kufamba uye vanoziva nemhuka.
Kubva ku5. Zera ipapo inopfuurira nevevory. Heano zviduku zviduku pane bhiza rechirasi rakaitwa panzvimbo. Nenzira iyi vana vanotamba vachirasika kutya kwekuwira pasi.
Kuvhiringidza kunowanzoitwa pakutanga pamatanda. Muchikwata, vana vanodzidza kukudziridza mafambiro emukati uye kuenderana neboka.
Kubva ku9. Gore rehupenyu, mwana uyu zvino anodzidza kuenzanirana kwekugadzirira sakaita sekusungirirwa uye kubata uye kutarisira mhuka. Iye zvino mawere anopiwa zvishoma nezvishoma kumwana ari mumaoko ake, kuitira kuti vadzidze mirairo yekutanga. Izvi zvinowanzotsigirwa ne Longenunterricht.
Pashure pegore, guta racho rinotasva pamwe chete. Vachida vabereki vari kudzidzawo mutambo uyu munguva pfupi. Saka zororo rinotevera pachitsiko chekutasva rinova mufaro chaiwo kune vose.
Kudzidza zvakanaka - nokuti kudzidza kunofadza
Kudzidza zvakanaka - ipapo munhu wose anogona kudzidza zvose
Ikoko yakakosha yevana ... | Pets
Kufungidza mapeji mabhiza uye akatasva
Vana vanofanira kudzidza kutamba uye kurasikirwa
Usamboenda nevasingazivi - iwe unofanira kudzidza kuti kwete
Dzidza zvakarurama - kuwedzera kukurudzira
Dzidza zvakarurama ne Mind Mindping
Kudzidza pane imwe nguva